ကိုပီတာရဲ့အတွေးပုံရိပ်များ: February 2011
ထိုင်းနိုင်ငံမှ ကမ္ဘာ့ အမွှေးအမျှင်အထူဆုံးမိန်းကလေး....
သူမအားခေါ်ဆိုကြသည့် နာမည်ပြောင်များတွင် "၀ံပုလွေမလေး"နှင့် "မျောက်မျက်နှာ" တို့ ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။
သို့ သော် အသက် ၁၁ နှစ်အရွယ်ရှိ ထိုင်းနိုင်ငံသူလေး ဆူပထရာဆာဆူဖန် ကတော့သူမကို ကမ္ဘာ့ အမွှေး
အမျှင်အများဆုံးမိန်းကလေးအဖြစ်တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုလိုက်ကြပြီဖြစ်ကြောင်း ယနေ့ အခိုင်အမာပြော
ဘန်ကောက်မြို့ တော်မှ ကျောင်းသူလေးဟာ ကျောင်းနေဖက်သူငယ်ချင်းများရဲ့ အဆက်မပြတ်သနားညှာ
တာခြင်းကင်းစွာ အစအနောက်ခံနေခဲ့ ရပေမယ့် သူမအနေနှင့် ယခုကဲ့ သို့ ကမ္ဘာ့ ထူးဆန်းမှတ်တမ်း၊ ဂင်း
နစ်အဖွဲ့ ကြီး၏ သူမ၏အမွှေးအမျှင်များအတွက် တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုခံရမှုကြောင့် အထူးတစ်လည်လူ
သိထင်ရှားလာခဲ့ ရပါတယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် သူမလိုမျိူးမျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးအမွှေးအမျှင်ပေါက်သူအယောက် ၅၀ ခန့် သာရှိပါတယ်...
ဒါကြောင့် သမီးကတော့ ပျော်ပါတယ် လို့ ဆိုတဲ့ အသက် ၁၁ နှစ်အရွယ်ရှိ ဆူပထရာဆာဆူဖန်...
'I'm very happy': Supatra Sasuphan, 11, is one of only 50 people ever to have Ambras syndrome which makes hair grow all over her face. She has now been recognised by the Guinness Book of Records.
" သမီးအနေနဲ့ ကမ္ဘာ့ ထူးဆန်းမှတ်တမ်းမှာ ဖော်ပြခံရတာကိုအလွန်ပဲဝမ်းသာပျော်ရွှင်မိပါတယ်...လူအများ
စုက အဲဒီလိုဖော်ပြခံရဖို့ အလွန်ကြိုးစားလေ့ ကျင့် လုပ်ဆောင်ရတာပါ...သမီးကတော့ သူတို့ မေးတဲ့ မေး
ခွန်းလေးတွေဖြေလိုက်ရုံနဲ့ ပဲ မှတ်တမ်းတင်ခံရတော့ တာပါပဲ..." လို့ သူမကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
ဆူပထရာလေးဟာ ထိုကဲ့ သို့ အမ်ဘ၇ာဆန်ဒရုန်းဟုခေါ်သော မွေးရာပါဗီဇချွတ်ယွင်းမှုကြောင်းဖြစ်ပွားရ
သည့် အဖြစ်ဆန်းမျိူးဖြစ်ပွားသူ တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် အယောက် ၅၀ မျှထဲမှတစ်ယောက်အပါအ၀င်ဖြစ်ပြီး ထို
ကဲ့ သို့ ဖြစ်ရပ်မျိူးဟာ ရှေးယခင်ခေတ်ကတည်းက ( အလယ်ခေတ် ) ရှိခဲ့ ပြီး ထိုရောဂါအကြောင်းသိရှိနား
လည်ခြင်းမရှိသေးခဲ့ စဉ်က ထိုသူများကို "သမန်းဝံပုလွေ " (မကောင်းဆိုဝါးဝံပုလွေကလူယောင်ဆောင်သူ)
သူမရဲ့ မျက်နှာ၊ နား၊ လက်မောင်း၊လက်ဖျံများ၊ ခြေထောက်များနှင့် ကျောဘက်တို့ တွင် အမွှေးအမျှင်များထူ
လေဆာကုထုံးဖြင့် အမွှေးအမျှင်များဖယ်ရှားကုသခြင်းပင်လျှင် အောင်မြင်ခြင်းမရှိပါဘူး...
တစ်ခြားသောထိုသို့ အမွှေးအမျှင်များပေါက်သူတွေအနေနှင့် လူတောမတိုးဝံ့ ပဲ အထီးကျန်သီးခြားနေလေ့ 
ရှိပေမယ့် ဆူပထရာကလေးကိုတော့ သူမရဲ့ ပါတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအ၀န်းက တဖြည်းဖြည်းနားလည်လက်ခံ
လာခဲ့ ကြလို့ ယခုဆိုလျှင်တော့ သူမဟာ နာမည်ကျော်ကြားလူသိများနေပြီး ပြင်ပသို့ ထွက်သွားထွက်လာပြု
လုပ်နေသည့် ကလေးတစ်ဦးဖြစ်လာနေခဲ့ ပါပြီ....
သမီးတို့ ကျောင်းရဲ့ နာမည်အကြီးဆုံး၊ လူကြိုက်အများဆုံးကျောင်းသူလေးပေါ့ ...
ရတ်ချာဘိုဖစ် ကျောင်းမှာတော့ ကမ္ဘာ့ အမွှေးအမျှင်အများဆုံးမိန်းကလေးဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်ကြောင့် ကိုပဲ
အခုတော့ သူတို့ သမီးကို မစကြတော့ ပါဘူး...
လေဆာရောင်ခြည်ကုထုံးနဲ့ ကုပေမယ့် လည်းအမွှေးတွေကတော့ ပေါက်စမြဲပေါက်လာနေဆဲပါပဲ...
They don't tease me anymore: doctors tried to remove Supatra's hair with laser treatment but it quickly grew back
" အယင်တုံးကလည်း လူနည်းနည်းကပဲသမီးကို မျောက်မျက်နှာနှင့် လူလို့ ခေါ်ပြီးစခဲ့ ကြတာဖြစ်ပြီး အခုဆို
ယင်တော့ ဘယ်သူမှ မစကြတော့ ပါဘူး...
သမီးအနေနဲ့ အခုလိုအခြေအနေကိုကျင့် သားရနေခဲ့ ပါပြီ...အမွှေးအမျှင်တွေနဲ့ တစ်ချိန်လုံးရှိနေခဲ့ တာမို့ အ
တစ်နေ့ နေ့ ကျယင်တော့ ပျောက်သွားလိမ်မယ်လို့ မျှော်လင့် မိပါတယ်..." လို့ သူမကဆိုခဲ့ ပါတယ်...
( ယခုလိုအမွှေးအမျှင်တွေပေါက်နေတာကလွဲလို့ ) ဆူပထရာကလေးဟာ တစ်ခြားကလေးတွေနဲ့ မခြားပါပဲ..
သူမဟာ ရေကူးဝါသနာပါတယ်၊ သူမအကြိုက်ဆုံးတေးသွား၊ သီချင်းတွေနဲ့ ကရတာကိုလည်းနှစ်သက်ပြီး သူ
နောက်ပြီး ဘန်ကောက်မြို့ စွန်၊ ပရနခွန်အရပ်က သူမရဲ့ အိပ်ခန်းတစ်ခန်းပါ မိသားစုအိမ်ကလေးမှာ တီဗီ
ရှေ့ ထိုင်ပြီး ကာတွန်းကားတွေကြည့် နေရတာကိုလည်း အကြိုက်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်...
ဖေဖေရယ်၊မေမေရယ်၊ မမ ဆူကန်ရာ ရယ်...
တစ်စိမ်းတွေကတော့ ဘန်ကောက်မြို့ လမ်းတွေပေါ်မှာတွေ့ ယင်အထူးအဆန်းဖြစ်လို့ သမင်လည်ပြန်
လှည့် ကြည့် ရစမြဲပါပဲ...ရပ်ကွက်ထဲမှာတော့သူမရဲ့ ချစ်စရာအမူအရာလေးတွေကြောင့် 
" သမီးကတီဗီကိုတော့အရမ်းကြိုက်တယ်...ဘာပဲလာလာကြည့် ချင်တာပါပဲ...ကာတွန်းကားဆိုယင်တော့
ပြောမနေနဲ့ တော့ပဲ...သချာင်္လည်းလေ့ လာရတာနှစ်သက်ပါတယ်...အဲဒါမှကိုယ့်ထက်ငယ်တဲ့ သူတွေကိုပြန်
တယ်...ထိခိုက်ဒါဏ်ရာရတဲ့ သူတွေကို ပြုစုကုသပေးချင်ပတယ်..." လို့ သူမကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
စကားတွေဖောင်အောင်ပြောတတ်တဲ့ ကလေးမလေးဟာ ယခုကဲ့ သို့ ထူးဆန်းတဲ့ အခြေအနေကြောင့် သူ
မရဲ့ ဘ၀ကို မထိခိုက်အောင်နေဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားပါတယ်...
သို့ သော်လည်းသူမရဲ့ အနာဂတ်ဟာတော့အမြဲတမ်းမဖြောင်ဖြူးခဲ့ ၇ပါဘူး...သူမကိုပထမဦးဆုံးမွေးခဲ့ ပြီး
နောက်မှာပဲ သူမပုံမှန်အသက်ရှုနိုင်ဖို့ နှစ်ကြိမ် ခွဲစိတ်ကုသခဲ့ ရပါတယ်...
" ဆူပထရာကိုမွေးမှပဲ သူ့ အဖြစ်အပျက်ကိုကျွန်တော်တို့ သိခဲ့ ရတာပါ...အယင်ကမမွေးခင်တုံးကမသိခဲ့ ရ
သူမရဲ့ နှာခေါင်းပေါက်လေးတွေဟာ တစ်မီလီမီတာသာကျယ်တာမို့ သူမဟာမကျန်းမာလှပါဘူး...
မွေးပြီးပထမသုံးလမှာ သူမအသက်ပုံမှန်ရှူနိုင်ဖို့ သူမကိုအပူပေးစက်ထဲမှာထည့် ထားခဲ့ ၇ပါတယ်...ဆေးရုံ
မှာချည်းပဲဆယ်လ ကြာခဲ့ ရပါတယ်..ကျွန်တော်တို့ ဖြင့်သူ့ အတွက်တော်တော်ကိုစိုး၇ိမ်ခဲ့ ကြရတာပါ..." လို့ 
အသက် ၃၈ နှစ်ရှိ ဖခင်ဖြစ်သူ ဆမ်မ၇န်း ကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
အမွှေးညှပ်ဖို့ အချိန်ရောက်ပြီ...အသက်ကလေးရလာလေ အမွှေးအမျှင်တွေကရှည်လာလေမို့ 
မိခင်ဖြစ်သူက ကတ်ကြေးနဲ့ ညှပ်ပေးနေရပါတယ်...
အတန်းဖော်တွေနဲ့ ကာယလေ့ ကျင့် ခန်းလုပ်နေတဲ့ ဆုပါထရာ....
သူမအသက်နှစ်နှစ်မှာ နောက်ထပ်ခွဲစိတ်ကုသမှပြုလုပ်ခဲ့ ပြီးနောက်အခုအခါမှာတော့ ပုံမှန်အသက်ရှူလို့ 
သို့ သော်လည်း ဆန်မရန်းနဲ့ ဇနီးသည် ဆွန်ဖွန်တို့ ဟာ သမီးလေးဆူပထရာကို ယခုအခါအသက် ၁၅နှစ်ရှိ
ပြီဖြစ်တဲ့သမီးကြီးဖြစ်သူ ဆူကန်ယာနဲ့ အတူနေဖို့ အိမ်ကိုခေါ်လာခဲ့ တဲ့ အခါမှာတော့ ပြဿနာတွေကြုံလာ
ခဲ့ ၇ပါတော့ တယ်...
" ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ အိမ်နီးချင်းတွေက ပထမတော့ ကလေးကိုမြင်ပြီး ကျွန်တော်ဘာအကုသိုလ်တွေများလုပ်
ထားခဲ့ ပြီလည်းလို့ မေးကြပါတယ်...
သမီလေးကြီးလာလို့ တစ်ခြားကလေးတွေက စယင်ဘယ်လိုများနေပါလိမ့် မလည်းလို့ အလွန်ပဲစိုးရိမ်မိခဲ့ ရ
ပါတယ်..." လို့ ဖခင်ဖြစ်သူကဆိုပါတယ်...
ဒါပေမယ့် သူမရဲ့ ချစ်စရာစရိုက်လေးများက အိမ်နီးချင်းနဲ့ ရပ်ကွက်ထဲကလူတွေကို ဖမ်းစားနိုင်ခဲ့ ပါတယ်....
ပန်းထိမ်ဆရာဆန်မရွန်း က " သမီးလေးဟာ တစ်ခြားသူတွေနဲ့ အလွန်ကိုခင်မင်တတ်ပြီးအလွန်လည်းသ
နဲ့ ဘာမှမခြားပဲ အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်...
ဒါပေမယ့် သူမသွားလေးတွေပေါက်တာနှေးပြီး မျက်စေ့ လည်းနည်းနည်းမှုံပါတယ်..." လို့ သူကဆက်ပြော
သူမအသက် ၂ နှစ်အရွယ်မှာ ဆရာဝန်တွေအနေနှင့် သူမရဲ့ အမွှေးအမျှင်များကို လေဆာကုထုံးဖြင့် အကြိမ်
ကြိမ်ဖယ်ရှားကုသပေးခဲ့ ပေမယ့် ယခင်ကထက်ပိုပြီးအမွှေးများလျင်မြန်စွာပြန်ပေါက်လာလေ့ ရှိခဲ့ ပါတယ်...
သူမအသက်ကြီးလာတာနှင့်အမျှ အမွှေးအမျှင်များလည်းပိုမိုထူထဲစွာပေါက်လာနေတာမို့ သူမရဲ့ မိခင်ဖြစ်သူ
အနေနှင့်ပုံမှန် ညှပ်ပေးနေခဲ့ ရပါတယ်....
ခေါင်းလျှော်ရည်အပြင်းစားများနှင့် လည်းမတည့် တာမို့ သူမဟာ ကလေးငယ်များအတွက်သုံးသည့် ခေါင်း
" တစ်နေ့ တော့သမီးလေးရဲ့ ရောဂါ ( အမွှေးအမျှင်တွေ ) ပျောက်သွားလိမ့် မယ်လို့ ကျွန်တော်ကတော့ 
ယုံကြည်မျှော်လင့် ပါတယ်...ရောဂါပျောက်ကင်းသက်သာမယ်ဆိုဘာပဲလုပ်ရလုပ်ရ ကျွန်တော်တို့ လုပ်မှာ
ဖြစ်ပါတယ်..." လို့ ဖခင်ဖြစ်သူ ဆန်မ၇ွန်း ကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
မြန်မာနိုင်ငံမှ တစ်ခေတ်တစ်ခါက လူမျောက်မောင်ရွှေမောင်မိသားစု
( အခုတော့ မျိူးရိုးဗီဇချွတ်ယွင်းမှုကြောင့် လို့ ဖြစ်တာသိကြရပြီပေါ့ ဗျာ...)
(ဓါတ်ပုံများကို ၀ီကီမြန်မာက ရှာဖွေတွေ့ ရှိတင်ပြပါတယ်...)
မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ကုန်းဘောင်ခေတ်၊ဘိုးတော်ဘုရားလက်ထက်တွင် မျက်နှာအပါအ၀င်တစ်ကိုယ်လုံးအ
မွှေးအမျှင်များဖုံးလွှမ်းပေါက်ရောက်နေသည့် လူမျောက် မောင်ရွှေမောင်ဆိုသူရှိခဲ့ ပြီး ထိုသူမှတစ်ဆင့် အိမ်
ထောင်ပြုကာ သမီးမယ်ပုံဆိုသူသည်လည်းဖခင်ကဲ့ သို့ ပင်တစ်ကိုယ်လုံးအမွှေးအမျှင်များဖုံးလွှမ်းပေါက်နေ
ခဲ့ ကာ ထိုမယ်ပုံမှမွေးသောသား မောင်ဆယ်နှင့် သမီးမယ်မိ တို့ မှာလည်း တစ်ကိုယ်လုံးအမွှေးအမျှင်များ
ပေါက်နေခဲ့ တယ်လို့ ဆိုပါတယ်...
နောက်ဆုံး ၎င်းမယ်ပုံတို့ မိသားစု ပြင်သစ်နိုင်ငံမှ ဆပ်ကပ်အဖွဲ့ တစ်ခုသို့ ရောက်ရှိသွားခဲ့ ကြောင်းမှတ်သား
၎င်းတို့ မိသားစုအကြောင်းကို ညီလင်းဆက် ကသူ့ ဘလော့ ဂ်မှာအကျယ်တ၀င့် ရေးထားပါတယ်...
Supatra is one of just 50 known sufferers of Ambras Syndrome - caused byafaulty
chromosome - to be documented since the Middle Ages. Before the disease was understood, sufferers were branded 'werewolves.'
It does sometimes make it difficult to see when it gets long.I hope I will be cured one day.'
'She was not very healthy because her nostrils were only one millimetre wide. For the first three months she was kept in an incubator to help her breathe.She was in the hospital foratotal of ten months. We were very worried about her.'
Supatra's hair has got increasingly thicker as she has grown up so her mother has to cut it back regularly for her.
Posted by peter kyaw | at 1:35 PM |0comments
၂၀၁၀ ခုနှစ်အတွက် အကောင်းဆုံးသတင်းဓါတ်ပုံများ....
ထိုင်းနိုင်ငံ၊ဘန်ကောက်မြို့ တွင် အစိုးရဆန့် ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲများအထွတ်အထိပ်အချိန် အဆောက်အဦးများ
မီးစွဲလောင်နေသည့် ကာလတွင် လူငယ်တစ်ဦး သူယုံကြည်ရာအတွက် လက်နက်မည်ကာမျှဟုသာဆိုနိုင်
မည့် အရာဖြင့် ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေခဲ့ သည်....
ထို ဂျင်ကလိ လူငယ်ကား မြင်မြင်သမျှ ဆန္ဒပြသူ၊ သာမန်လူ၊ ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည်မှအစ သတင်းထောက်
များပါမကျန် မည်သူ့ ကိုမဆို ပစ်မိန့် ပေးထားသည့် စစ်ပွဲဇုံ၊ ဧရိယာအတွင်း လက်နက်ကိုင်စစ်သားများကို
ရင်ဆိုင် အန်တုခဲ့ လေသည်...
ထိုသို့ ဆန္ဒပြသူများအပြင် သက်စွန့် ဆန်ဖျားကြိုးပမ်းသူကား ထိုဓါတ်ပုံများကိုရိုက်ကူးသူ ပြင်သစ်နိုင်ငံသား
ဓါတ်ပုံသတင်းထောက် ကိုရင်တင်ဖိုလင် ဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ရဲဝံ့ စွန့် စားမှုအတွက် လျှပ်တစ်ပြက်သတင်းဓါတ်ပုံ
ရိုက်ချက်ကဏ္ဍအတွက် ကမ္ဘာသတင်းဓါတ်ပုံအဖွဲ့ ကချီးမြှင့် ခဲ့ သည့် အကောင်းဆုံးသတင်းဓါတ်ပုံ ဒုတိယ
ယခုတင်ပြခဲ့ သည့် အကောင်းဆုံးဓါတ်ပုံများကား ထိုဓါတ်ပုံများ၏နောက်ကွယ်တွင် ထိတ်လန့် အံ့ သြဖွယ်
အကောင်းဆုံးဆုကိုတော့ တောင်အာဖရိကမှ ဂျိူဒီဘီဘာက မိဘသဘောတူကာအတင်းလက်ထပ်ပေးသူ
ထံမှထွက်ပြေးခဲ့ သဖြင့် နှာခေါင်းအဖြတ်ခံခဲ့ ရသည့် အာဖဂန်နစ္စတန်မှ ဘီဘီအိုင်ရှာ ၏ဓါတ်ပုံဖြင့် 
တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်းအတွက်ရိုက်ကူးဖော်ပြနိုင်ခဲ့ သဖြင့် ဆွတ်ခူးရရှိသွားပါတယ်...
တောင်အာဖရိကဓါတ်ပုံဆရာရိုက်ကူးခဲ့ သည့် ခင်ပွန်းဖြစ်သူက သူမရဲ့ နှာခေါင်းနှင့် နားရွက်တို့ ကိုလှီးဖြတ်
ခြင်းခံခဲ့ ရသည့် အာဖဂန်အမျိူးသမီးတစ်ဦးရဲ့ ဓါတ်ပုံကတော့ စိတ်ထိခိုက်ကြေကွဲခံစားရဆုံးဓါတ်ပုံဖြစ်ခဲ့ ပါ
ဂျိူဒီဘီဘာရိုက်ကူးခဲ့ တဲ့ ပုံမှာ အမေရိကန်တပ်သားများကကယ်တင်ခဲ့ ပြီးယခုအခါအမေရိကန်နိုင်ငံတွင်နေ
ထိုင်လျှက်မျက်နှာပြင်ခွဲစိတ်ကုသဖို့ စောင့် စားနေသည့် အသက် ၁၈ နှစ်အရွယ်ရှိဘီဘီအိုင်ရှာ၏ပုံဖြစ်ပြီး
၂၀၁၀ ခုနှစ်အတွက် ကမ္ဘာ့ အကောင်းဆုံးသတင်းဓါတ်ပုံဆုရရှိခဲ့ ပါတယ်...
( ယခုသတင်းတင်နေချိန်မှာတော့သူမကိုခွဲစိတ်ကုသပေးခဲ့ ပြီးဖြစ်ပါတယ်...)
ထိုဓါတ်ပုံတွင် ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံနေခဲ့ ရသည့် အိမ်ထောင်ဖက်ထံမှထွက်ပြေးခဲ့ သည့် မိန်းကလေးအား
အကြမ်းဖက်နှိပ်စက်ခဲ့ သဖြင့်အမျိူးသမီးတစ်ဦး၏အလှတရားနှင့် ဆန့် ကျင်စွာခံစားရပုံကိုတင်ပြထားပြီး
တိုင်းမ် မဂ္ဂဇင်းမျက်နှာဖုံးအဖြစ် လွန်ခဲ့ သည့် နှစ် သြဂုတ်လ ကပုံနှိပ်ဖော်ပြခဲ့ ပါတယ်...
အသက် ၄၄ နှစ်ရှိ ဘီဘာ ဟာ အပျော်တမ်းဓါတ်ပုံသတင်းထောက်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ၁၉၉၈ ခုနှစ်မှယခု
အထိ ကမ္ဘာ့ သတင်းဓါတ်ပုံဆု ရှစ်ဆု ရရှိခဲ့ ပြီးဖြစ်ပါတယ်...
သူမရဲ့ မွေးရပ်ဇာတိ အာဖရိကနှင့် ပါတ်သက်ပြီးစာအုပ်နှစ်အုပ်ထုတ်ဝေခဲ့ ပါတယ်...
သူမရဲ့ ဓါတ်ပုံဟာထိတ်လန့် အံ့ သြစရာကောင်းသော်လည်း အမျိူးသမီးများအား အကြမ်းဖက်နှိပ်စက်ခြင်း
ကို သိက္ခာရှိရှိနဲ့ ဖော်ကျူးနိုင်ခဲ့တာမို့ အကောင်းဆုအဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်လို့ အဆုံးအဖြတ်ပေး
သည့် လူကြီးမင်းများကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
ထိုဓါတ်ပုံကို ဖော်ပြသင့် မဖော်ပြသင့် အတွက်တောင်အပြင်းအထန်ဆွေးနွေးငြင်းခုံအခြေအတင်ဖြစ်ခဲ့ ကြ
အိုင်ရှာကတော့ တာလီဘန်သူပုန်တွေရဲ့ ဆိုးဝါးရက်စက်မှုကို စာဖတ်သူများသိရှိစေနိုင်ရန်အတွက် တိုင်းမ်
မဂ္ဂဇင်းမှာဖော်ပြဖို့ ဓါတ်ပုံအရိုက်ခံခဲ့ တာပါလို့ ဆိုခဲ့ ပါတယ်...
ပင်လယ်ဓါးပြများပျော်စံတဲ့ ဆိုမာလီနိုင်ငံ၊ မိုဂါဒစ်ရှူးမြို့ မှ ငါးတစ်ကောင်သယ်ယူလာသည့် 
ပုံဖြစ်ပါတယ်..နေ့ စဉ်လူမှုဘ၀ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ပထမဆုရရှိခဲ့ ပါတယ်...
မက္ကစီကိုနိုင်ငံ ယူကာတန်ကျွန်းဆွယ် အတ္တလန္တိတ်ရေအောက်မှ ငါးတိုက်ပွဲ
ဂျာမနီနိုင်ငံမှ ဓါတ်ပုံဆရာ ရိန်းဟာ့ ဒ်ဒါချားလ် ကထိုဓါတ်ပုံဖြင့် သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဒုတိယဆု
အားကစားဝတ္တုများခေါင်းစဉ်ဖြင့်တတိယဆုရသွားခဲ့ သည့် ပုံဖြစ်ပါတယ်...
ဂျပန်နိုင်ငံ၊ ဟိုကိုင်ဒိုကျွန်းပေါ်မှ ငန်းများကို အီတလီနိုင်ငံသား စတီဖာနိုအန်တာသီနာ က အမျိူးသား
သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင် ၀တ္တုခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဒုတိယဆု ရရှိခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ ဂျာဗားကျွန်း၊ စီမိုရိုလာဝမ်း ဒေသက ပြာပူများအံထွက်ကျနေသည့် ဘရိုမို မီးတောင်
ဆီသို့ နတ်ဘုရားအားပူဇော်ပသရန်သွားရောက်နေသည့် ဟိန္ဒူဗြဟ္မန အယူရှိသူများပုံ ကိုတော့ 
အေအက်ဖ်ပီဓါတ်ပုံသတင်းထောက် ခရစ်စတို့ ဖ်အာချမ်ဘို့ တ် ကရိုက်ကူးခဲ့ ပါတယ်....
ဆိုမာလီနိုင်ငံမှ ယီမင်နိုင်ငံသို့ ရောက်အောင် သည်းသည်းမည်းမည်းရွာနေသည့်မိုးအောက်တွင်
ရွှံ့ ညွံထူထပ်သည့် လမ်းများတစ်လျှောက် တစ်ညလုံးခရီးပြင်းနှင်လာပြီးနောက်သဲကန္တာရ
အတွင်းလဲလျောင်းအိပ်စက်နေကြပုံကို ကနေဒါနိုင်ငံသား အက်ဒ်အိုး ကရိုက်ကူးခဲ့ ပြီး
ခေတ်ပြိုင်အဖြစ်အပျက်များခေါင်းစဉ်ဖြင့် ပထမဆု ရရှိခဲ့ ပါတယ်...
ဘင်္ဂလားဒေ့ ရ်ှနိုင်ငံ၊ ဒါကာမြို့ တော်မှ မီးရထားစီးသူများ ပုံကိုတော့ ဒါကာမြို့ မှာအခြေစိုက်တဲ့ ရိုက်တာ
သတင်းထောက် အင်ဒရူးဘီရက်ဂ်ျ ကရိုက်ကူးခဲ့ ပြီး လူမှုနေ့ စဉ်ဘ၀ ခေါင်းစဉ်ဖြင့် တတိယဆု
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ကာလကတ္တားမြို့ မှာ ဖြတ်သွားသည့် ရထားတစ်စင်းအားစောင့် ဆိုင်းနေသည့် တက္ကစီ
နှင့် လန်ခြားပုံပါ....နယ်သာလန်အခြေစိုက်ဓါတ်ပုံဆရာ မာတင်ရိုးမား ကရိုက်ကူးခဲ့ ပြီး
နေ့ စဉ်လူမှုဘ၀ အကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်ဖြင့် ပထမဆု ရရှိခဲ့ ပါတယ်...
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ဆရီနဂါမြို့ မြောက်ပိုင်း ပက်တန်အရပ်မှာ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ များကြောင့် သေဆုံးခဲ့ရသူ
ရှောင်ကက်ခေါ် ဖီရို့ ဇ်အာမက်ရဲ့ အစ်မ သူ့ ရဲ့ အလောင်းစင်ပေါ်တက်ပြီး ၀မ်းနည်းပူဆွေးငိုကြွေးနေပုံပါ...
ရိုက်ကူးသူ အာတက်ဖ်ကာဒရီဟာ စံချိန်တင်အဖြစ်နိုင်ငံပေါင်း ၁၂၅ နိုင်ငံမှ ဓါတ်ပုံဆရာပေါင်း၅၈၄၇
ဦးဖြင့် ဓါတ်ပုံပေါင်း ၁၀၈၀၅၉ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ရာမှာ ဆန်ကာတင်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့ သည့် 
နိုင်ငံစုံ ၂၃နိုင်ငံမှ ဓါတ်ပုံဆရာပေါင်း ၅၆ ယောက်ရိုက်ကူးခဲ့ သည့် 
လူသစ်တန်းမှာ ပထမဆု ရရှိခဲ့ ပါတယ်...
လူမှုကွန်ယက်အင်တာနက်အတွက် ကိုယ့် ကိုယ်ကို ရိုက်သည့် ပုံကဏ္ဍတွင် ဒုတိယဆု ရရှိခဲ့ သည့် 
ဂျာမနီနိုင်ငံမှ ၀ူဖ၇မ်ဟန်းန် ရဲ့ ပုံဖြစ်ပါတယ်...
ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲကာလအတွင်း အမေရိကန်စစ်တပ်မှ အသုံးပြုခဲ့ သည့် ဓါတုအဆိပ်ကြောင့် လူစဉ်မမှီ
ဖြစ်ခဲ့ ရသည့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၊ ဒါနန်းမှ အသက် ၉ နှစ်အရွယ် ဗီယက်နမ်သူလေး ငုယင်သီလိုင်
ကို အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ ဆဲဗင်း ဓါတ်ပုံသတင်းဌာနမှ အက်ဒ်ကာရှီ ကရိုက်ကူးခဲ့ ပြီး
ခေတ်ပြိုင်ကဏ္ဍမှာ ဒုတိယဆု ရရှိခဲ့ ပါတယ်...
အသည်းငယ်သူ၊ ကြောက်တတ်၊ ရွံတတ်သူများမကြည့် ပါနှင့် ...
ဟေတီငလျင်ကြောင့် သေဆုံးသူများအား ရင်ခွဲရုံတွင်စုပုံထားသည့် ပုံကိုတော့ ပြင်သစ်သတင်း
အေဂျင်စီမှ အိုလီဗီယာလဘန်မက်တေး ကရိုက်ကူးခဲ့ ပြီး အထွေထွေသတင်းဝတ္တုကဏ္ဍတွင်
ပထမဆု ရရှခဲ့ ပါတယ်...
ဟန်ဂေရီနိုင်ငံ၊ ဘူဒါပက်မြို့ တော်တွင်မိမိကိုယ်ကိုမီးရှို့ ကာအမြင့် မှခုန်ချပြီးသေကြောင်းကြံသူတစ်ဦး
အား ဟန်ဂေရီနိုင်ငံမှ ပီတာလာကာတို့ စ် ကရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပြီး လျှပ်တစ်ပျက်သတင်းကဏ္ဍ
အတွက် ပထမဆု ဆွတ်ခူးခဲ့ ပါတယ်...
Posted by peter kyaw | at 2:09 AM |2comments
Labels: news: source : Daily Mail
သရဲကြောက်လို့ အဆောင်လက်ဖွဲ့ အခု ၁၀၀၀ ၀တ်ထားသူ....
သူရဲကြောက်လို့ အဆောင်ထားတာ... အခု ၁၀၀၀ တဲ့ ဗျာ....
ထိုင်းနိုင်ငံမှ သရဲ၊တစ္ဆေအလွန်ကြောက်တတ်သည့် အမျိူးသားတစ်ဦးဟာ ဂမ္ဘီရအဆောင်ပေါင်း အခု ၁၀၀၀
ကိုနေ့ စဉ်ဝတ်ဆင်ဆောင်ထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်....
ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ချင်းမိုင်မြို့ ရှိ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ ကြီးကြပ်ရေးမှူးတစ်ဦးဖြစ်သည့် အသက် ၄၀ အ
ရွယ်ရှိ အဆိုပါအမျိူးသားက ၎င်းဆောင်ထားရသည့် အဆောင်လက်ဖွဲ့ ပစ္စည်းများ၏အလေးချိန်ပင်လျှင် ကီ
လို ၃၀ မျှရှိသည်ဟုဆိုပါတယ်....
" ကျွန်တော်က ငယ်ငယ်ကလေးဘ၀ကတည်းကသရဲ၊ တစ္ဆေဆိုအလွန်ကြောက်တတ်ပြီး အိပ်မက်ထဲမှာဆို
ယင်းလည်းအမြဲပဲ သရဲစီးခံရ၊ တစ္ဆေပူးခံနေရတယ်လို့ မြင်မက်နေရပါတယ်...
ဂမ္ဘီရအဆောင်လက်ဖွဲ့ တွေကို လွန်ခဲ့ တဲ့ အနှစ်၂၀ ကတည်းကစပြီးဝတ်ဆင်လာခဲ့ တာယခုဆို အခု၁၀၀၀
နီးပါးရှိနေပါပြီ...." လို့ သူကဆိုခဲ့ ပါတယ်...
ထိုအဆောင်လက်ဖွဲ့ များဟာ တစ်ခုကို ယိုးဒယားငွေ ၁၀ ဘတ်( မလေးရှား ၁ ရင်းဂစ် ) ခန့် မှ ဘတ်၂သိန်း
( ရင်းဂစ် ၁၉၈၆၆ ) အထိတန်ဖိုးရှိကြပါတယ်လို့ လည်း သူကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
" အခုတော့ သရဲတစ္ဆေ ကိုသိပ်မကြောက်တော့ ပါဘူး...ဓါးပြတိုက်ခံရမှာကိုပဲစိုးရိမ်ပူပန်မိပါတယ်...ဒါပေ
မယ့် အဆောင်လက်ဖွဲ့ တွေဝတ်ထားတာတော့ အကျင့် လိုဖြစ်နေခဲ့ ပါပြီ...." လို့ သူကပြောကြားခဲ့ ပါ
A Thai man, who is extremely afraid of ghosts, wears about 1,000 amulets daily.
The 40-year-old supervisor of an electronic appliances company in Chiangmai said the amulets weigh about 30kg.
"I have been very afraid of ghosts since I was young and have always dreamt that I'm possessed by spirits.
"I started wearingafew amulets 20 years ago and now, I have almost 1,000," he said.
The man said the amulets are worth between 10 Bath (RM1) and 200,000 Bath (RM19,866).
"I'm not so frightened anymore, but wearing the amulets has becomeahabit," he said, adding that he is now more worried about being robbed.
Posted by peter kyaw | at 1:14 AM |3comments
Labels: news: source Agencies
Gaddafi's All Female Bodyguards
တိုင်းသူပြည်သား၊ နိုင်ငံသားများရဲ့ ဆန့် ကျင်ကန့် ကွက်ဆန္ဒပြမှုတွေ၊ တော်လှန်တိုက်ခိုက်နေတာကိုခံနေ
ရလို့ ရာထူးမှစွန့် ခွာရတော့ မယ့် လစ်ဗျားနိုင်ငံအာဏာရှင်ကဒါဖီ ဟာသူ့ ရဲ့ ကိုယ်ရံတော်တပ်ဖွဲ့ ကို အမျိူး
မိမိကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုမရှိသူ၊ ကြောက်ရွံ့ တတ်သူတို့ ရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း သူ့ ကိုလုပ်ကြံလိမ့် မယ်လို့ စိုးရိမ်
စိတ်လွန်ကဲနေသူမို့ အမျိူးသားကိုယ်ရံတော်တပ်ဖွဲ့ ကိုမထားတာဖြစ်ပါတယ်...
အခုနောက်ဆုံးအချိန်အထိ ယူကရိန်းနိုင်ငံသူ၊ သူနာပြုအမျိူးသမီးတစ်ဦးကို အနားမှာအမြဲထားတယ်လို့ ဆို
ရောက်လေရာနိုင်ငံများမှာ တည်းခိုဆောင်၊ ဧည့် ရိပ်သာများမှာမတည်းပဲ သူ့ အတွက်သီးသန့် တဲထိုးပြီးနေ
တတ်တဲ့ ခပ်ကြောင်ကြောင်စရိုက်ရှိတဲ့ ကဒါဖီနဲ့ သူ့ ရဲ့ ကိုယ်ရံတော်အမျိူးသမီးများပုံတွေကို ဗဟုသုတအ
ယနေ့ ကျွန်ုပ်ကိုဆန့် ကျင်ကန့် ကွက်နေတဲ့ သူတွေကို ကျွန်ုပ်ရဲ့ နောက်ဆုံးသွေးစက်ကျန်သည်အထိ...
အဲ...မှားလို့ ခင်ဗျားတို့ အားလုံးရဲ့ နောက်ဆုံးသွေးစက်အထိ ( အားလုံးကိုသတ်ပြစ်ပြီး...) ခုခံသွားပါမယ်..
ကိုယ့် အနားမှာ မင်းပဲနေပါကွယ်...
နှစ်ယောက်စလုံး " ဇ " ရှိတဲ့ သူတွေချည်းပဲ...
သူတို့ လေးတွေနဲ့ မှ လုံခြုံတယ်...
Heavy to see you...
ကိုယ်ရံတော်တွေထဲမှာတော့ တောင့် တင်းလှပါပေတယ်...
သူတို့ လေးတွေနဲ့ မှ နေချင်တယ်...
မြင်ရုံတင်နဲ့ တင် စိတ်မှာလုံခြုံချင်စရာပါပဲ...
စစ်ဝတ်စုံတွေညီတူနဲ့ သမ္မကြီးရဲ့ လုံခြုံရေးကိုတာဝန်ယူ....
အလှဆုံးက အနီးဆုံးမှာနေ... ကိုယ်ရံတော်အမျိူးသမီးတွေဟာ အပျိူစင်လည်းဖြစ်ရမယ်လို့ ဆိုကြပြန်
Posted by peter kyaw | at 9:34 AM | 1 comments
PhD man shoplifts to save money
ပါရဂူဘွဲ့ ရပုဂ္ဂိုလ် ငွေစုချင်၍ဆိုင်မှပစ္စည်းများငွေမပေးပဲ အလစ်သုတ်....
ပါရဂူဘွဲ့ ရလည်း ခိုးတတ်သေးတာပါပဲ...
အသက် ၂၈နှစ်အရွယ်ရှိ ပီအိတ်ခ်ျဒီ ပါရဂူဘွဲ့ ရအမျိူးသားတစ်ဦးဟာ ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံမှ စူပါမားကက်တစ်ခုတွင်
ပစ္စည်းများဆိုင်ရှင်မသိအောင်ခိုးယူခဲ့ သည်ကို လက်ပူးလက်ကြပ်မိခဲ့ ပါတယ်...
ယာယီကထိက (နည်းပြ) ဆရာဖြစ်သည့် ထိုအမျိူးသားဟာ တိုင်ပေမြို့ ရှိ ၎င်း၏နေအိမ်အနီးမှ စတိုးဆိုင်သို့ 
( ဈေးဝယ်ရန် ) လွန်ခဲ့ သည့် တနင်္ဂနွေနေ့ည ၉ နာရီကျော်ကသွားရောက်ခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
ရေခဲမုန့် နှင့်တစ်ခြားသောက်စရာယမကာများကို ၎င်း၏အိတ်ထဲသို့ ထည့် နေသည်ကို ဆိုင်ရှင်မှတွေ့ ရှိခဲ့ 
သော်လည်း ( ၎င်းအား ပါရဂူဘွဲ့ ရတစ်ယောက်မှန်းသိ၍ထင်သည် ) ဘာမျှမပြောခဲ့ ပါဘူး...
၎င်းနောက်ထိုသူက( မလေးရှားငွေ ၁ ရင်းဂစ်နှင့် တန်ဖိုးညီမျှသော ) ထိုင်ဝမ်ငွေ ၁၀ (တန်ဖိုးရှိအအေးတစ်
ဗူးဖိုးသာပေးပြီး) ထွက်သွားတော့ မည်လုပ်တော့ မှ ၎င်းအားဆိုင်ရှင်မှတားလိုက်ပါတော့တယ်...
၎င်းနောက်ရှာဖွေတော့ မှ ငွေမပေးပဲခိုးဝှက်ယူထားသည့် ထိုင်ဝမ်ငွေ ၄၀၀ ( မလေးရင်းဂစ် ၄၁ ) နှင့် ညီမျှ
သည့် ပစ္စည်းများ၎င်းထံမှတွေ့ ရှိခဲ့ ပါတော့ တယ်...
၎င်း၏မိခင်ဖြစ်သူအားအကြောင်းကြားခဲ့ ပြီး သူမရဲစခန်းသို့ လိုက်လာခဲ့ ပြီးနောက် သူ၏ပိုက်ဆံအိတ်ထဲတွင်
ထိုင်ဝမ်ငွေ ၈၀၀ ( မလေးရင်းဂစ် ၈၃ ) ကိုတွေ့ ရှိခဲ့ ပါတယ်...
" မင်းမှာပိုက်ဆံရှိရဲ့ သာနဲ့ ဘာဖြစ်လို့ မပေးတာလည်း " လို့ မိခင်ဖြစ်သူက ပါရဂူဘွဲ့ ရသားအားဆူပူခဲ့ ရာ
ထိုသူပြန်ပြောလိုက်သောစကားကြောင့် သူမအနေနှင့် ပါးစပ်အဟောင်းသားဖြစ်သွားခဲ့ ရပါတယ်...
ထိုပါရဂူအမျိူးသားက ၎င်းအနေနှင့် သူ့ ရဲ့ အနာဂတ်အတွက် ငွေစုနေသောကြောင့် ( ယခုကဲ့ သို့ ဆိုင်ထဲမှ
ပစ္စည်းများအား ငွေမပေးပဲ ခိုးယူခဲ့ တာဖြစ်တယ်လို့ ) ဖြစ်တယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
ထိုပစ္စည်းခိုးယူသူဟာ ငွေကြေးဥစ္စာချမ်းသာသည့် မိသားစုမှဖြစ်သည်လို့ ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
A 28-year old PhD graduate was caught shoplifting atasupermarket in Taiwan.
The temporary teacher went to the store near his house in Taipei aftert 9pm on Sunday.
The shopkeeper saw him putting some ice-cream and beverages intoabag, but did not say anything.
And just as the man was about to leave after only paying foracan drink, worth NT$10 (RM1), at the counter, the shopkeeper stopped him.
Afterasearch, unpaid goods worth over NT$400 (RM41) were recovered from the man.
His mother, who was informed of the son’s act, rushed to the police station and found more than NT$800 (RM83) in his wallet.
"You have the money, why are you not paying?" she scolded her son but was speechless after listening to his explanation.
The man apparently told her that he was saving up for the future.
Police said the suspect was from ofawell-off family.
Posted by peter kyaw | at 2:00 AM |2comments
Labels: news: source: apple daily
သဘာဝရေလှိုင်းသဏ္ဍာန်ကျောက်ဆောင်ကြီးကတော့ ကျောက်ရေလှိုင်းလို့ ခေါ်ပြီး သြစတေးလျ
နိုင်ငံအနောက်ပိုင်း ဟိုင်ဒင်မြို့ အရှေ့ ဖက်မှာတည်ရှိပါတယ်...
ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာမှာရိုက်ခတ်နေတဲ့ ရေလှိုင်းကြီးသဏ္ဍာန်ဖြစ်နေတာမို့ လည်း ထိုနာမည်တွင်နေခဲ့ 
ထိုကျောက်တန်းမှာ ဂရက်နိုက်သားများဖြင့်ဖြစ်တည်နေတာဖြစ်ပြီး ဟက်တာ ( ဧက ) ပေါင်းများ
ထိုကျောက်တန်းကြီးဟာ ၁၅ မီတာမြင့် ပြီး ၁၁၀မီတာခန့် ရှည်လျားပါတယ်...
Posted by peter kyaw | at 12:18 AM |2comments
Thai prime minister could lose his job... because of his British citizenship
ကြီးချူပ် ရာထူးမှစွန့် လွှတ်ရမည်လော....
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၊ နယူကာဆယ်မြို့ မှာမွေးဖွားခဲ့ ပြီး နှစ်နိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူထားလို့ အသက် ၄၆ နှစ်ရှိ
ထိုင်းဝန်ကြီးချူပ်အဘိစစ်ဝဇ္ဇာဇီဝ တစ်ယောက် ရာထူးမှစွန့် ရဖွယ်ရှိ...
Dual nationality: Thai Prime Minister Abhisit Vejajjiva, 46, was born in Newcastle and retains British citizenship
လက်ရှိထိုင်းဝန်ကြီးချူပ်အဘိဆစ် အနေဖြင့်ထိုင်းနိုင်ငံသားအဖြစ်အပြင် ဗြိတိန်နိုင်ငံသားအဖြစ်ပါ ခံယူထား
သည့် အတွက် ၎င်း၏၀န်ကြီးချူပ်ရာထူးအားစွန့် လွှတ်ရလိမ့် မည်ဟု ထိုင်းနိုင်ငံမှ နိုင်ငံရေးသမားအတိုက်
၎င်းအနေဖြင့် ထိုကဲ့ သို့ နှစ်နိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူထားတာကို ၀န်ကြီးချူပ်အဘိဆစ်ဝိဇ္ဇာဇီဝ က ပါလီမန်အ
တွင်း မေးမြန်းဆေးနွေးပွဲတစ်ခုတွင် ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ယနေ့ ဝန်ခံပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
အသက် ၄၆ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ မစ္စတာအဘိဆစ်အား ဘန်ကောက်မြို့ မှချမ်းသာကြွယ်ဝသည့် မိဘနှစ်ပါးက ဗြိ တိန်နိုင်ငံ၊ နယူကာဆယ်မြို့ တွင်မွေးဖွားခဲ့ သည်မို့ ဗြိတိန်နိုင်ငံသားအဖြစ် အလိုအလျောက်ခံစားခွင့် ရှိခဲ့ 
၎င်းအနေဖြင့် ( ၀န်ကြီးချူပ်ရာထူးအားမစွန့် လွှတ်လိုပါက ) ဗြိတိန်နိုင်ငံသားအဖြစ်မှ စွန့် လွှတ်ကြောင်းလူသိ
ရှင်ကြား သီးသန့် ကြေငြာရမှာဖြစ်ပါတယ်...
သို့ သော်လည်း ၎င်း၏နိုင်ငံရေးအတိုက်အခံများကတော့ သူဟာဗြိတိန်နိုင်ငံသားဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပြောဆိုခဲ့ 
မှုအပေါ် ချက်ကောင်းယူကာ၎င်း၏အစိုးရအဖွဲ့ သက်တမ်းကာလအတွင်း လွန်ခဲ့ သည့် နှစ်ကဖြစ်ပွားခဲသည့် 
ရှပ်နီများ၏အစိုးရဆန့် ကျင်ရေးလှုပ်ရှားဆန္ဒပြမှုများအား အင်အားသုံးနှိမ်နင်းခဲ့ သည့် ကျူးလွန်ခဲ့ မှုများ
အား နိုင်ငံတစ်ကာခုံရုံးတွင် တရားစွဲဆိုခံနိုင်ရဖွယ်ရှိသည်ဟု အားပါးတစ်ရ၊ ၀မ်းပန်းတစ်သာဖြင့် ပြောကြား
ဆန္ဒပြသူများအား အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းခဲ့ မှုကြောင့် မစ္စတာအဘိဆစ်ကိုနိုင်ငံတစ်ကာတရားရုံမှာ
Clashes: Political opponents claim Mr Abhisit could be sued in international court over claims of abuse during the Red Shirt protests last year
ဆန္ဒပြသူရှပ်နီ များဟာ လွန်ခဲ့ သည့် နှစ်မေလကဖြစ်ပွားခဲ့ သည့် အရေးအခင်းတွင်ထိုင်းစစ်တပ်နှင့် အပြင်း
အထိ တိုက်ခိုက်ခဲ့ စဉ်အတွင်းအစိုးရအဆောက်အဦးများအားမီးတင်ရှို့ ခဲ့ ကြသည်။ လူပေါင်းများစွာလည်း
အတိုက်အခံများက မစ္စတာအဘိဆစ်ရဲ့ ဗြိတိန်နိုင်ငံ၊ အောက်စဖို့ တက္ကသိုလ်မှ အဆင့် မြင့် ဘွဲ့ ရမှုကိုအစဉ် အမြဲပျက်ရယ်ပြုကာ ၎င်းတို့ ၏ မိန့် ခွန်း၊ ဟောပြောချက်များတွင် မစ္စတာအဘိဆစ်အား ၎င်း၏အင်္ဂလိပ်နာ
မည် ဖြစ်သော မာ့ ခ် ဟုသာရည်ညွန်းပြောကြားလေ့ ရှိပါတယ်...
မစ္စတာအဘိဆစ်ဟာ အီတန်ကောလိပ်တွင်တက်ရောက်ပညာသင်ကြားခဲ့ ပြီး အောက်စဖို့ တက္ကသိုလ်၊ စိန့် 
ဂျွန်းကောလိပ်မှ အဆင့် မြင့် ဂုဏ်ထူးဖြင့် ဘွဲ့ ရရှိခဲ့ ပါတယ်...
သူဟာ အသက် ၂၇ နှစ်အရွယ်မှာ ပါလီမန်အမတ်အဖြစ်အရွေးခံခဲ့ ရပြီး၊ ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဒီမိုက
သူဟာ ထိုင်းနိုင်ငံသမိုင်းရဲ့ နှစ်ပေါင်း ၆၀ အတွင်းမှာ အသက်အငယ်ဆုံးဝန်ကြီးချူပ်အဖြစ် ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်
ဘလ မှာ ပါလီမန်ရဲ့ ထောက်ခံမှုဖြင့် ရောက်ရှိခဲ့ ပါတယ်...
နိုင်ငံရေးဆိုတာ အလွန်အင်မတန်မှလည်း ခံစားချက် ( emotion ) နဲ့ ဆိုင်တဲ့ ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တယ်ဗျာ...
Political opponents have claimed Thailand's prime minister could lose his job... because of his British citizenship.
Prime Minister Abhisit Vejajjiva today publicly acknowledged his dual nationality for the first time duringadebate in Parliament.
Mr Abhisit, 46, automatically holds British citizenship because he was born in Newcastle, to parents fromawell-off Bangkok family.
He would have to specifically renounce it to lose British citizenship.
But his political opponents have jumped on the admission and claimed that asaBritish citizen, he can be sued in international court over alleged abuses during his administration's crackdown on anti-government protests last year.
Red Shirt protesters torched government buildings during violent clashes with the Thai army in May last year, with scores of people killed.
Opponents have continuously ridiculed Mr Abhisit for his upper-class Oxford University education and typically refer to him in speeches by his English name, Mark.
He attended Eton College and gainedafirst class degree from St John's College, Oxford.
He was elected into Parliament at the age of 27, and became Democrat Party leader in 2005. He was endorsed as Prime Minister in December 2008 afteravote by Parliament - the youngest in nearly 60 years.
Posted by peter kyaw | at 12:12 AM |4comments
Mistresses in China go online
တရုတ်နိုင်ငံက စပွန်ဆာ၊ ဇယားလေးများ၏ အွန်လိုင်းအင်တာနက်စာမျက်နှာ....
တရုတ်နိုင်ငံမှ လူကုန်ထံများ၏ အမြှောင်မယား၊ မယားငယ်လေးများက ၎င်းတို့ ၏အတွေ့ အကြုံများဖလှယ်
ရန်နှင့်၎င်းတို့ ၏ချစ်သူများထံမှ ငွေများများရအောင် မည်ကဲ့ သို့ ညှစ်ထုတ်နိုင်မည့် နည်းလမ်းများ လည်း
သုံးသပ်ဆွေးနွေးအကြံဥာဏ်များဝေငှနိုင်ရန် အင်တာနက်စာမျက်နှာတစ်ခု တည်ထောင်ခဲ့ လိုက်ကြပါတယ်။
www.xeixe.com လို့ အမည်ရတဲ့ အင်တာနက်စာမျက်နှာ၊ ၀က်ဘ်ဆိုဒ် ဟာ တရုတ်နိုင်ငံဇယားလေးများအ
သင်းကြီး မှစီစဉ်ထိန်းချူပ်ထားတာဖြစ်ပြီး အဖွဲ့ ဝင်ပေါင်း ၇၀၀ ကျော်ရှိကာ ထိုအဖွဲ့ ဝင်များဟာလည်းဝက်ဘ်
ဆိုဒ်သို့ ဝင်ရောက်သုံးစွဲနိုင်ရန်အတွက်ဝင်ကြေးပေးထားကြသည့် အိမ်ထောင်ရှိအမျိူးသားများနှင့် ပါတ်သက်
နေသည့် မယားငယ် များသာဖြစ်ပါတယ်...
စတင်တည်ထောင်ဖွင့် လှစ်ခဲ့ သည်မှာ ၇ လကျော်ကြာခဲ့ ပြီဖြစ်သည့် အဆိုပါဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် အဓိကဆွေး
နွေးသည့် အကြောင်းအရာများကတော့ အလှအပ၊ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းဈေးဝယ်ထွက်ခြင်း၊ မိတ်ဆွေဖွဲ့ 
ခြင်း၊ အတွေ့ အကြုံများဖလှယ်ခြင်း နှင့် ရင်သားများ အရွယ်အစားကြီးမားအောင်ဖန်တီးကြခြင်း စသည့် အ
ကြောင်းအရာများပင်ပါဝင်သည်ဟု နိုင်ငံပိုင် ရုန်ဟိုင်း နေ့ စဉ်သတင်းစာကဖော်ပြခဲ့ ပါတယ်...
မယားငယ်များဟာ ၎င်းတို့ ၏အိမ်ထောင်ရှိအမျိူးသားများထံမှ မည်ကဲ့ သို့ ငွေကြေးထောက်ပံ့ မှုများရရှိခဲ့ 
ကြသည်များကို အတွေ့ အကြုံဖလှယ်ရုံမျှမက အွန်လိုင်းပေါ်မှာပင်၎င်းတို့ အချင်းချင်းထိုအမျိူးသားချစ်သူ
ဦးရဲ့ ညနေတွေကို ဘ၀အမောတွေပြေစေဖို့ ရယ်ပါ....
၎င်းတိုက သူတို့ ကိုယ်သူတို့ ငယ်ရွယ်၊ ပွင့် လင်းကာ အရှက်အကြောက်မရှိပြီး တရုတ်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုဓ
လေ့ ထုံးစံများကို တန်ဖိုးထားခြင်းမရှိ၊ အလေးထားလိုက်နာခြင်းမရှိသည့်ခေတ်သစ် ကျွမ်းကျင်အဆင့် မယား
ငယ်များ ဟုကင်ပွင်းတတ်ကြပြီး ၎င်းတို့ အလုပ်လုပ်ပါကရရှိမည့် လစာငွေကြေးထက်ပိုကာ ၎င်းတို့ ၏အိမ်
ထောင်ရှင်ချစ်သူများကထောက်ပံ့ ပေးကမ်းထားခြင်းကြောင့် တစ်ရက်မျှပင် အလုပ်လုပ်စရာမလိုကြောင်း
ပြောကြားခဲ့ ကြသည်ဟု ရှန်ဟိုင်းနေ့ စဉ်သတင်းစာက ဆိုပါတယ်...
အဆိုပါမယားငယ်အမျိူးသမီးများဟာ ၎င်းတို့ ၏ဖော်ပြချက်များကိုအဆိုပါဝက်ဘ်ဆိုဒ်၏အဖွင့် စာမျက်နှာ
တွင်လင့် ခ်များဖြင့် ဖော်ပြထားကြပြီး ၎င်းတို့ နှင့် ပါတ်သက်နေသည့် ချမ်းသာကြယ်ဝသော အမျိူးသားများ
အကြောင်းအပြင် ၎င်းတို့ လက်ခံရရှိသည့် အဖိုးတန်လက်ဆောင်များ၊ လစဉ်ရရှိသည့် မုန့် ဖိုးငွေ ယွမ် ၂သောင်းမှ ၃သောာင်း၊ အဖိုးတန်ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ၊ ကားများနှင့် အိမ်ခန်း၊တိုက်ခန်းများအကြောင်းပါ ဖော်ပြ
တစ်ချိူ့ ကတော့ တစ်ခြားသူများကို ချစ်သူစပွန်ဆာများထံမှ ငွေဘယ်လောက်ရကြောင်းနှင့် ထိုကဲ့ သို့ ငွေ
တစ်ချိူ့ ( ဥာဏ်ကြီးသည့် ) ဇယား၊အမျိူးသမီးများကတော့ ပြီးပြည့် စုံသည့် ပေးဆပ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်စေ
ရန် နည်းလမ်းများအား အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် သင်ပြပေးမည်ဟု ကြေငြာကမ်းလှမ်းထားကြပါတယ်...
ရွှေပြည်ကြီးလည်း ဒီလိုမျိူးသင်တန်းဖွင့် ယင် တက်လိုက်ကြမယ့် သူလေးတွေ .....
Mistresses in China have set up upawebsite to share their experiences as well as "methods to squeeze more money" out of their lovers.
The website www.xeixe.com - apparently operated by "China's Association for Mistresses," is only accessible by its 700-plus paid-up female members, all of whom claim to be mistresses of married men.
The topics most discussed on the forum, which has been online for more than seven months, include shopping, making friends, sharing experiences and even breast enhancement, state-run Shanghai Daily reported.The mistresses share their experiences of being financially supported by married men and even exchange their "lovers" on online.
They call themselves "newage professional mistresses" who are young, bold, shameless , not shackled by Chinese traditional values and they don't have to workasingle day because their lovers pay themahigher salary than they could ever earn, according to the Shanghai Daily.
The mistresses publish links to their posts on the front page of the website and describe their relationships with wealthy men as well as the expensive gifts they receive: 20,000 to 30,000 yuan (RM9,276 to RM13,915 )amonth in pocket money, luxury products, cars and even apartments.
Some ask others about how much money they can get from their lovers and what methods could be used to "squeeze more money out of them."
Some of the mistresses also offer free online courses on training to be the perfect lover.
Posted by peter kyaw | at 11:50 PM |2comments
Labels: news:source PTI
Navy woman accuses sailor of 'rape'
ဗြိတိန်နိုင်ငံ တော်ဝင်ရေတပ်မှ အမှုထမ်းအမျိူးသမီးတစ်ဦးဟာ ရေတပ်သားတစ်ဦးက သူမ၏ချစ်သူအဖြစ်
ဖြင့် ထင်မှတ်မှားခဲ့ မိသဖြင့် အလိုမတူပဲအတင်းအဓမ္မမုဒိန်းကျင့် ခဲ့ သည်ဟုစွပ်စွဲပြောဆိုခဲ့ ပါတယ်...
(အရက်မူးနေခဲ့ သည့် ) သူမသတိရလို့ နိုးလာခဲ့ ချိန်မှာတော့ သူမနှင့် သဲသဲမဲမဲချစ်ပွဲဝင်နေသည့် သူဟာ
သူမချစ်သူမဟုတ်ပဲ တစ်ခြားသူတစ်ယောက်ဖြစ်နေတာကို တွေ့ ရှိခဲ့ ရပါတယ်...
သူမကုတင်ပေါ်တက်ပြီး သူမနှင့် ချစ်ပွဲဝင်နေသူဟာ သူမရဲ့ ချစ်သူရေတပ်သားနှင့် အတူတူ စကော့ တလန်
လေယူလေသိမ်းဖြင့် ပြောသဖြင့် ထိုသူတစ်စိမ်းတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်းသတိမပြုမိခဲ့ ပါဘူးလို့ သူမက အ
ထိုသူ သူမရဲ့ ကုတင်ပေါ်တက်လာချိန်မှာတော့ သူမနိုးခဲ့ ပါသေးတယ်...
သို့ သော်လည်း အရက်ကြောင့် ရီဝေမူးကာ ( ပုံမှန်စဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်စွမ်းမရှိပဲ ) သတိလက်လွတ်ဖြစ်နေ
သည်မို့ သူမရဲ့ ချစ်သူလို့ သာထင်မှတ်ယုံကြည်နေခဲ့ ပါတယ်...
" ကျွန်မဟာ အရက်မူးပြီး အိပ်ပျော်လိုက်နိုးလိုက်ဖြစ်နေခဲ့ ပါတယ်...အရက်ကလည်းအလွန်မူးနေတာကိုး...
တစ်စုံတစ်ယောက်က ကျွန်မရဲ့ လည်တိုင်ကိုအနမ်းလေးတွေပေးနေလို့ ကျွန်မနိုးလာခဲ့ ပါတယ်...ဒါပေမယ့် 
ကျွန်မရဲ့ ချစ်သူ ဂရက် လို့ ထင်ခဲ့ မိပါတယ်..." လို့ သူမကဆိုခဲ့ ပါတယ်...
" ကျွန်မက မျက်လုံးတွေမှိတ်ပြီးဆက်နေခဲ့ ပါတယ်...သူဟာအနမ်းတွေကတစ်ဆင့် ရှေ့ ဆက်တိုးလာခဲ့ ကာ
နောက်ဆုံး တော့ ချစ်တင်းနှောတဲ့ အဆင့် ထိရောက်လာပါတော့ တယ်...အဲဒီအချိန်အထိကျွန်မရဲ့ ချစ်သူ
ဂရက်လို့ ထင်နေခဲ့ ပြီး ကြည်နူးပျော်ရွင်နေခဲ့ တာပါပဲ..." လို့ သူမကဆက်ပြောခဲ့ ပါတယ်...
အဲဒီနောက်သူမရဲ့ ကုတင်ကြီးယိမ်းထိုးလှုပ်ယမ်းနေတာမို့ သူမလည်း နိုးလာကာ သတိရလာခဲ့ ပါတယ်...
" ကျွန်မမျက်လုံးဖွင့် ပြီးချစ်သူဂရက်ကိုကြည့် လိုက်တော့မှ သူဟာ ဂရက်မဟုတ်မှန်းသိလိုက်ရတော့ တာပါ
သေချာအောင်ဒုတိယအကြိမ်ထပ်ကြည့် လိုက်ကာမှ သူမဟုတ်တာမို့ ရှင်ထွက်သွားပါလို့ ပြောပြီး အဲဒီလူကို
ကုတင်ပေါ်က တွန်းချခဲ့ လိုက်ပါတယ်..." လို့ သူမကပြောပြခဲ့ ပါတယ်...
အရက်သေစာဆိုတာ ( ဘီယာလည်းပါတယ်နော်...) စဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်စွမ်းကိုယုတ်လျော့ စေ၊ ပျက်စီးစေ
တယ်ဆိုတာ အလေးမထားပဲ အပျော်ကြောင့် ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အလုပ်သဘော၊ လူမှုရေးကြောင့် ပဲဆိုဆို၊ ဆင်ခြေ
မျိူးစုံနဲ့ ကျူံးသွင်းဖို့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ လုပ်တဲ့ အထိမ်းအမှတ်ပွဲ ( မွေးနေ့ ပွဲ၊ ရာထူးတက်ပွဲ၊ နှစ်သစ်ပွဲ စသည်..
စသည် ) တို့ ဖြင့်ပြုလုပ်စုံတွေ့ ပွဲတွေမှာ အရက်၊ ဘီယာသောက်ချင်တတ်တဲ့ အထူးသဖြင့် ပြည်ပရောက်
အူရိုင်း ရွှေမြန်မာမလေးများ သတိပြုစေချင်ပါတယ်...
နည်းနည်းလေးပဲရပါတယ်ဆိုပြီးသောက်ရာက တစ်တစ်စများကာ နောက်ဆုံးသတိရလာတော့ မှ သူစိမ်း
ယောကျာင်္းတစ်ယောက်၊ ကိုယ့် ချစ်သူမဟုတ်တဲ့ ယောကျာင်္းတစ်ယောက်ရဲ့ ကုတင်ပေါ်မှာ ရောက်နေတာ
သိလိုက်ရတဲ့ အဖြစ်မျိူးဟာ ရေတွက်လို့ တောင်ရမယ်မထင်ပါဘူး...
မနေနိုင်လို့ သောက်ချင်ယင်လည်း မိန်းကလေးများသာစုတဲ့ ပွဲတွေမှာသောက်ကြပေါ့ ...ဒါတောင်မှ အဲဒီလို
ဆင်ခြင်နိုင်စွမ်းလျော့ ကျစေတဲ့ အရာတွေသုံးစွဲပြီးယင် ကိုယ်တိုင်ကိုက အန္တရယ်ရှိတဲ့ နေရာတွေဆီကိုမှ
A woman from the Royal Navy has accusedasailor of rape after mistaking him for her lover.
She woke up to find she was having sex with the wrong man.
She claimed she didn’t realise she was in bed with her lover’s shipmate – as both men had Scottish accents.
She awoke whenaman climbed into the bed.
Ina‘drunken and unconscious’ state, she believed it was her lover.
"I was drifting in and out of sleep, I was very drunk. I woke up to someone kissing my neck, I thought it was Greg (her lover)," she said.
"My eyes were closed, he carried on kissing me and one thing led to another and basically we had sex and at this time I still believed it was Greg. I began to enjoy it," she continued.
She started waking up properly because the bed was rattling.
"I opened my eyes and looked up thinking it was Greg (her lover) then realised it wasn’t Greg,"
"I hadasecond glance and that is when I said, “No”. I said, “No, get off’. I pushed that lad off," she said.
Posted by peter kyaw | at 11:49 PM |3comments
Oral sex more dangerous than smoking
သဘာဝကိုဆန့် ကျင်သူတွေအတွက် သဘာဝရဲ့ ဒါဏ်ခတ်ချက်....
သဘာဝကိုဆန့် ကျင်ယင် သဘာဝကြီးကဒါဏ်ခတ်တတ်ပါတယ်...
သဘာဝနှင့် ဆန့် ကျင်စွာ ပါးစပ်ဖြင့် လိင်မှုဆက်ဆံခြင်းဟာ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းထက် လည်ချောင်းကင်
ပါးစပ်ဖြင့် ချစ်သူကြင်ဖက်( အခကြေးငွေပေးပြီးပျော်ပါးသူ )၏ပန်းအစုံကို နမ်းငုံခြင်းဟာ ယခုအခါတွင် အ
သက် ၅၀အောက်အရွယ်များတွင် ခံတွင်း အတွင်းရောဂါပိုးကူးစက်ပျံ့ ပွားပြီး ( papillomavirus ရောဂါပိုး )
လည်ချောင်းကင်ဆာဖြစ်ရခြင်း၏ အဓိကအချက်အလက်၊ အကြောင်းတရားဖြစ်နေပါသည်ဟု အင်္ဂလန်နိုင်ငံ
ထုတ် ဒေလီမေးလ် သတင်းစာကြီးကဖော်ပြခဲ့ ပါတယ်...
ခံတွင်းထဲမှာ ဒီ HPV ပိုးတွေက အလွယ်တစ်ကူပေါက်ဖွားကူးစက်နိုင်ပါတယ်...
HPV ( Human Papillomavirus ) ဟုခေါ်သည့်အဆိုပါ ခံတွင်းအတွင်းပျံ့ ပွားသည့် ရောဂါပိုးဟာ လွန်ခဲ့ 
သည့် ဆယ်စုနှစ်များအတွင်း အသက်အန္တရယ်ထိခိုက်စေသည်အထိဖြစ်နိုင်သောပါးစပ်နှင့် လည်ချောင်း
ကိုလံဘတ်မြို့ မှ အိုဟိုင်ယိုပြည်နယ်တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခ မော်ရာဂစ်ဘဆွန်က ( ပါးစပ်၊ ခံတွင်းဖြင့် ) လိင်
ဆက်ဆံမှုကြောင့် ဖြစ်ပွားသည့် လည်ချောင်း၊ ခံတွင်းကင်ဆာဟာ ဆေးလိပ်၊ ဆေးရွက်ကြီးကြောင့် ဖြစ်ပွား
ရခြင်းထက် ပိုမိုအဓိကကျတဲ့ အချက်ဖြစ်နေပါတယ် လို့ ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
ဆ၇ာဝန်များကတော့ ယောကျာင်္းလေးများ ( အမျိူးသားများ ) ဟာလည်း မိန်းကလေးများကဲ့ သို့ အဆိုပါကင်
ဆာရောဂါပိုးပြန့် ပွားခြင်းမှတားဆီးကာကွယ်ရန် HPV ပိုးကာကွယ်ဆေးထိုးကြဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့ ပါတယ်....
ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာတော့ အသက် ၁၂ နှစ်နဲ့ အသက် ၁၃ နှစ်အရွယ်ရှိမိန်းကလေးများကိုသားအိမ်ကင်ဆာကာ
ကွယ်ဆေးထိုးပေးဖို့ အမျိူးသားကျန်းမာရေးဌာနမှ စီစဉ်ပေးလေ့ ရှိပါတယ်...
အဆိုပါရောဂါကြောင့် နှစ်စဉ်အမျိူးသမီး ၁၀၀၀ ခန့် ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာသေဆုံးလျှက်ရှိပါတယ်...
အလွယ်တကူကြည့် ရှုနိုင်နေတဲ့ အွန်လိုင်းမဖွယ်မရာဆိုဒ်များ၊ ဗီဒီယိုကလစ်များကြောင့် လူငယ်များအကြား
အလွန်ပျံ့ နှံ့ ရေပန်းစားနေတဲ့ အလေ့ အထတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့ အရာအတွက် သဘာဝတရားရဲ့ ဒါဏ်ခတ်မှုအ
ကြောင်းအခုလိုသတိပေးချက် ထွက်ပေါ်လာတာကို သတိပြုဆင်ခြင်သင့် ပါတယ်...
တစ်ခဏတာ သာယာမှုအတွက် သူတစ်ပါးအန္တရယ်ဖြစ်စေတာမျိူးတော့ ရှောင်ကြဉ်သင့် ပါတယ်....
Oral sex is more likely to cause throat cancer than smoking does.
Scientists have warned that human papillomavirus (HPV) spread during oral sex is now the main cause of throat cancer in people under 50, The Daily Mail reports.
The HPV virus is to blame for the rise in potentially deadly oral cancers in the last few decades.
Prof Maura Gillison of Ohio State University in Columbus said the sexually transmitted virus wasabigger cause of some oral cancers than tobacco.
In the United Kingdom, girls aged 12 and 13 are offered the vaccine on the National Health Service to protect against cervical cancer.
The disease kills nearly 1,000 women every year in the UK.
Posted by peter kyaw | at 1:38 AM |4comments
The 'wolf child' delighted to be named the world's...
The catapult kid of Bangkok, the Time cover girl m...
Wave Rock at Hyden, Australiaသဘာဝရေလှိုင်းသဏ္ဍာန်ကျေ...
Thai prime minister could lose his job... because ...
I've got these stabbing pains: Man complains about...
It'safrog eat frog world out there! Giant amphib...
Indian minister reads wrong UN speech
Valentine's Day world record attempt for longest e...
Clap and bra comes off
ရွှေပြည်ကြီးက သဘာဝတောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်ဥယျာဉ်... ...
'I'm addicted to eating soap': The 19-year-old gir...
The Kitara guitarMisa Digital's Kitara guitar has ...
Swim in freezing river
Giant Toasted Ants?
Polish man survives sleeping rough in -5°C because...
Whipped to death for having 'affair' with married ...
Passengers on train rooftop killed
ဧကံဖြိုး ရဲ့"ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်" ..... ကမ္ဘာဦးတ...
HIV street drug 'Whoonga' is South Africa's latest...
A job interview that comes withafree iPad (even ...
Haitians eat mud cakes to fill stomachs
Couple remarry 57 years after divorce